【အလှအပနှငျ့ကနျြးမာရေး】Placenta Previa ချေါ အခငျြးရှရေ့ောကျခွငျးအကွောငျးသိကောငျးစရာ | Opinion Leaders
【အလှအပနှငျ့ကနျြးမာရေး】Placenta Previa ချေါ အခငျြးရှရေ့ောကျခွငျးအကွောငျးသိကောငျးစရာ
ဒီအပတျတော့ ကိုယျဝနျဆောငျမိခငျတှမှော တှရေ့တတျတဲ့ အခွအေနတေဈခုဖွဈတဲ့ placenta previa လို့ချေါတဲ့ အခငျြးရှေ့ ရောကျခွငျးအကွောငျး ဖျောပွမှာပါ။
အခငျြး (Placenta) ဆိုတာ ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျတောကျလြှောကျ fetus လို့ချေါတဲ့ ကလေးလေးနဲ့အတူ မိခငျရဲ့ သားအိမျထဲမှာရှိနပွေီး ကလေးလေးအတှကျ လိုအပျတဲ့ အောကျဆီဂငျြ နဲ့ အာဟာရဓါတျတှကေို ဖွညျ့ဆညျးပေးပွီး ကလေးဆီက အညဈအကွေးတှကေို စှနျ့ထုတျပေးတာပါ။အခငျြး placenta နဲ့ ကလေးလေးကို umbilical cord လို့ချေါတဲ့ ခကျြကွိုးနဲ့ ဆကျသှယျပေးထားတာပါ။ အခငျြးဟာ ပုံမှနျအားဖွငျ့ သားအိမျရဲ့ ထိပျပိုငျး ဒါမှမဟုတျ ဘေးဘကျမှာသာ တှယျကပျတညျရှိနတောပါ။
Placenta previa လို့ချေါတဲ့ အခငျြးရှရေ့ောကျတယျဆိုတဲ့ အခွအေနမှောတော့ အခငျြးဟာ lower segment လို့ချေါတဲ့ သားအိမျရဲ့ အောကျခွပေိုငျး မှာရှိနရေငျချေါတာပါ။
1. Major placenta previa - အခငျြးဟာ သားအိမျအောကျခွပေိုငျးမှာရှိနတေဲ့အပွငျ internal cervical os လို့ချေါတဲ့ ကလေးထှကျမယျ့ လမျးကွောငျးဖွဈတဲ့ သားအိမျအဝကို ပါ ဖုံးပွီး တညျရှိနခွေငျး နှငျ့
2.Minor placenta previa - သားအိမျအောကျခွပေိုငျးမှာ ရှိပမေယျ့ သားအိမျအဝကိုတော့ ဖုံးအုပျမနခွေငျး
၃)အရငျက Caesearean section လို့ချေါတဲ့ ဗိုကျခှဲကလေးမှေးထားတဲ့သူတှေ (ခှဲထားတဲ့ သားအိမျအနာရှတျနရောမှာ အခငျြးလာသှယျခွငျး)
၄)အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့သားအိမျကို ခှဲစိတျထားဖူးတဲ့သူတှေ (ဥပမာ- သားအိမျအလုံးခှဲခွငျး)မှာပိုဖွဈတတျပါတယျ။
တှရေ့မယျ့ လက်ခဏာတှကေတော့ -
-Third trimester လို့ချေါတဲ့ ကိုယျဝနျ ၂၈ ပတျ နောကျပိုငျးမှာ ဗိုကျမနာဘဲ သှေးဆငျးတာနဲ့ တှရေ့နိုငျပါတယျ။ (ဘာကွောငျ့ လဲဆိုတော့ ကိုယျဝနျ၂၈ ပတျနောကျပိုငျး သားအိမျအောကျခွေ ဖှံဖွိုးလာတဲ့အခါ
အခငျြးကှာတာဖွဈလို့ပါ။)အာထရာဆောငျး ရိုကျကွညျ့ရငျတော့ အခငျြးက ပုံမှနျမဟုတျတဲ့နရောမှာ ရှိနတော တှရေ့မှာပါ။ ဗိုကျပျေါမှာ စမျးသပျကွညျ့ရငျတော့ ကလေးထှကျရမယျ့ လမျးကွောငျးအဝမှာ
အခငျြးပိတျနတောကွောငျ့ ကလေးလေးက တငျပဆုံရိုးခှငျထဲ မဝငျနိုငျဘဲ စမျးမိနမှောပါ။
အရေးပျေါ ကုသမှုလို မလိုဆိုတာ ဒီအခကျြတှပေျေါမူတညျပါတယျ။
- သှေးဆငျးတဲ့ ပမာဏ
- ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျ ကာလ (ကလေး လစေ့ မစေ့)
- ကလေး ကနျြးမာရေး
- အခငျြးတညျနရော (major or minor)
အခငျြးရှရေ့ောကျတာသာရွှိပီး သှေးမဆငျးလြှငျ သို့မဟုတျ သှေးဆငျးတဲ့ပမာဏ အနညျးငယျပဲ ဆိုရငျတော့ - အိမျမှာပဲ အနားယွူ
ူပီး သှေးဆငျးတာပိုဆိုးစတေဲ့ လှုပျလှုပျရှားရှားလုပျတာ ပွေးတာ လိငျဆကျဆံတာ စတာတှေ ရှောငျကွညျရမှာပါ။ အရေးပျေါ သှေးဆငျးတာဖွဈလာရငျ နီးစပျရာ ဆေးရုံသို့ အမွနျဆုံးရောကျအောငျသှားနိုငျအောငျ
ပွငျဆငျထားသငျ့ပါတယျ။ အခငျြးက သားအိမျအဝကို ဖုံးမနရေငျတော့ ကိုယျဝနျ ၃၇ ပတျကြျောရငျ ရိုးရိုးမှေးလို့ ရနိုငျပါသေးတယျ။ ဘယျလိုမှေးမလဲကတော့ သကျဆိုငျရာ ဆရာဝနျနဲ့ တိုငျပငျဆှေးနှေးသငျ့ပါတယျ။
သှေးဆငျးတဲ့ ပမာဏ အရမျးမြားရငျတော့ - နီးစပျရာ ဆေးရုံသို့ အမွနျဆုံးသှားပွီး အရေးပျေါကုသမှုခံယူရမှာပါ။ ကလေးက လစွပေီ့ တနညျးအားဖွငျ့ ကိုယျဝနျ ၃၇ ပတျကြျောပွီဆိုရငျတော့ ခှဲမှေးဖို့ ပွငျဆငျရတော့မှာပါ။
ကိုယျဝနျ ၃၆ ပတျမတိုငျခငျဆိုရငျတော့ ကလေး လမစရေ့ငျ အဆုတျကောငျးကောငျးမဖှံဖွိုးသေးလို့ corticosteroid လို့ချေါတဲ့ ဆေးတမြိုးထိုးပီး ခှဲမှေးဖို့ ပွငျဆငျရမှာပါ။ သှေးဆငျးတာလညျးမရပျရငျ
ကလေးလညျးမကောငျးရငျတော့ လစတေဲ့ထိ မစောငျ့ဘဲ အရေးပျေါခှဲမှေးရမှာပါ။
*အခငျြးရှရေ့ောကျတဲ့ မိခငျတှရေဲ့ ၁၀ ရာခိုငျနှုနျးလောကျက Placenta abruption လို့ချေါတဲ့ အခငျြးကှာတာ ဖွဈနိုငျပါတယျ။*
ဒီအပတ်တော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေမှာ တွေ့ရတတ်တဲ့ အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်တဲ့ placenta previa လို့ခေါ်တဲ့ အချင်းရှေ့ ရောက်ခြင်းအကြောင်း ဖော်ပြမှာပါ။
အချင်း (Placenta) ဆိုတာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်တောက်လျှောက် fetus လို့ခေါ်တဲ့
ကလေးလေးနဲ့အတူ မိခင်ရဲ့ သားအိမ်ထဲမှာရှိနေပြီး ကလေးလေးအတွက် လိုအပ်တဲ့ အောက်ဆီဂျင် နဲ့ အာဟာရဓါတ်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးပြီး ကလေးဆီက အညစ်အကြေးတွေကို စွန့်ထုတ်ပေးတာပါ။ အချင်း placenta နဲ့ ကလေးလေးကို umbilical cord လို့ခေါ်တဲ့ ချက်ကြိုးနဲ့ ဆက်သွယ်ပေးထားတာပါ။ အချင်းဟာ ပုံမှန်အားဖြင့် သားအိမ်ရဲ့ ထိပ်ပိုင်း ဒါမှမဟုတ် ဘေးဘက်မှာသာ တွယ်ကပ်တည်ရှိနေတာပါ။ Placenta previa လို့ခေါ်တဲ့ အချင်းရှေ့ရောက်တယ်ဆိုတဲ့ အခြေအနေမှာတော့ အချင်းဟာ lower segment လို့ခေါ်တဲ့ သားအိမ်ရဲ့ အောက်ခြေပိုင်း မှာရှိနေရင်ခေါ်တာပါ။
1. Major placenta previa - အချင်းဟာ သားအိမ်အောက်ခြေပိုင်းမှာရှိနေတဲ့အပြင် internal cervical os လို့ခေါ်တဲ့ ကလေးထွက်မယ့် လမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ သားအိမ်အဝကို ပါ ဖုံးပြီး တည်ရှိနေခြင်း နှင့်
2.Minor placenta previa - သားအိမ်အောက်ခြေပိုင်းမှာ ရှိပေမယ့် သားအိမ်အဝကိုတော့ ဖုံးအုပ်မနေခြင်း
၃)အရင်က Caesearean section လို့ခေါ်တဲ့ ဗိုက်ခွဲကလေးမွေးထားတဲ့သူတွေ (ခွဲထားတဲ့ သားအိမ်အနာရွတ်နေရာမှာ အချင်းလာသွယ်ခြင်း)
၄)အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်သားအိမ်ကို ခွဲစိတ်ထားဖူးတဲ့သူတွေ (ဥပမာ- သားအိမ်အလုံးခွဲခြင်း)မှာပိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။
တွေ့ရမယ့် လက္ခဏာတွေကတော့ -
-Third trimester လို့ခေါ်တဲ့ ကိုယ်ဝန် ၂၈ ပတ် နောက်ပိုင်းမှာ ဗိုက်မနာဘဲ သွေးဆင်းတာနဲ့ တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ (ဘာကြောင့် လဲဆိုတော့ ကိုယ်ဝန်၂၈ ပတ်နောက်ပိုင်း သားအိမ်အောက်ခြေ ဖွံဖြိုးလာတဲ့အခါ အချင်းကွာတာဖြစ်လို့ပါ။)အာထရာဆောင်း ရိုက်ကြည့်ရင်တော့ အချင်းက ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့နေရာမှာ ရှိနေတာ တွေ့ရမှာပါ။ ဗိုက်ပေါ်မှာ စမ်းသပ်ကြည့်ရင်တော့ ကလေးထွက်ရမယ့် လမ်းကြောင်းအဝမှာ အချင်းပိတ်နေတာကြောင့် ကလေးလေးက တင်ပဆုံရိုးခွင်ထဲ မဝင်နိုင်ဘဲ စမ်းမိနေမှာပါ။
အရေးပေါ် ကုသမှုလို မလိုဆိုတာ ဒီအချက်တွေပေါ်မူတည်ပါတယ်။
- သွေးဆင်းတဲ့ ပမာဏ
- ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် ကာလ (ကလေး လစေ့ မစေ့)
- ကလေး ကျန်းမာရေး
- အချင်းတည်နေရာ (major or minor)
အချင်းရှေ့ရောက်တာသာရြှိပီး သွေးမဆင်းလျှင် သို့မဟုတ် သွေးဆင်းတဲ့ပမာဏ အနည်းငယ်ပဲ ဆိုရင်တော့ - အိမ်မှာပဲ အနားယြူ
ူပီး သွေးဆင်းတာပိုဆိုးစေတဲ့ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားလုပ်တာ ပြေးတာ လိင်ဆက်ဆံတာ စတာတွေ ရှောင်ကြည်ရမှာပါ။ အရေးပေါ် သွေးဆင်းတာဖြစ်လာရင် နီးစပ်ရာ ဆေးရုံသို့ အမြန်ဆုံးရောက်အောင်သွားနိုင်အောင် ပြင်ဆင်ထားသင့်ပါတယ်။ အချင်းက သားအိမ်အဝကို ဖုံးမနေရင်တော့ ကိုယ်ဝန် ၃၇ ပတ်ကျော်ရင် ရိုးရိုးမွေးလို့ ရနိုင်ပါသေးတယ်။ ဘယ်လိုမွေးမလဲကတော့ သက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
သွေးဆင်းတဲ့ ပမာဏ အရမ်းများရင်တော့ - နီးစပ်ရာ ဆေးရုံသို့ အမြန်ဆုံးသွားပြီး အရေးပေါ်ကုသမှုခံယူရမှာပါ။ ကလေးက လစြေ့ပီ တနည်းအားဖြင့် ကိုယ်ဝန် ၃၇ ပတ်ကျော်ပြီဆိုရင်တော့ ခွဲမွေးဖို့ ပြင်ဆင်ရတော့မှာပါ။ ကိုယ်ဝန် ၃၆ ပတ်မတိုင်ခင်ဆိုရင်တော့ ကလေး လမစေ့ရင် အဆုတ်ကောင်းကောင်းမဖွံဖြိုးသေးလို့ corticosteroid လို့ခေါ်တဲ့ ဆေးတမျိုးထိုးပီး ခွဲမွေးဖို့ ပြင်ဆင်ရမှာပါ။ သွေးဆင်းတာလည်းမရပ်ရင် ကလေးလည်းမကောင်းရင်တော့ လစေ့တဲ့ထိ မစောင့်ဘဲ အရေးပေါ်ခွဲမွေးရမှာပါ။
*အချင်းရှေ့ရောက်တဲ့ မိခင်တွေရဲ့ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်က Placenta abruption လို့ခေါ်တဲ့ အချင်းကွာတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။*